भिडियो निर्देशनमा जम्दै निकेश | ArtistSansar.com
दिपेन भेटवाल,आर्टिस्ट नेपाल
टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माताको अभिभारा सम्हाल्दै नेपाल वान टेलिभिजनमा विगत १० वर्ष देखि सक्रिय सञ्चारकर्मी निकेश खड्काले छोटो समयमै सफल भिडियो निर्देशकको चिनारी बनाएका छन् । निर्देशनमा फरक स्वाद पस्कन रुचाउने खड्काको फरक कामकै कारण उनको ब्यस्तता आजभोलि अझै बढ्दै गएको देखिन्छ । तिन वर्षअघिदेखि निर्देशनको यात्रा थालेका निकेशको पहिलो भिडियो प्रजिता गेलालको स्वरमा सुसज्जित झुमीझुमीले दर्शकमाझ राम्रो छाप छाडेपछि उनलाई कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन ।
भर्खरै मात्र निकेशले रंगकर्मीलाई म्युजिक भिडियोमा समावेश गराई नयाँ ट्रेन्डको सुरुवात गरेका छन् । रंगकर्मी सुनिल पोखरेलले पहिलोपटक निकेशको भिडियोमा अभिनय गरेका छन् । सुगम पोखरेलको स्वरमा रहेको “मेरो जिवन यस्तो होस” बोलको उक्त गित रिलिजको तयारीमा छ । यसैगरी चलचित्र तथा रंगमञ्चमा जमेका सफल कलाकार सौगात मल्ललाई पनि उनले अभिनय गराएका छन् । सौगातले निकेशद्धारा निर्देशीत सुरज थापाले गाएको “बहुला हो म बहुला” मा अभिनय गरेका हुन् । म्युजिक भिडियोकै सेरोफेरोमा रहेर आर्टिस्ट नेपालले उनीसँग गरेको छोटो कुराकानी ः
#म्युजिक भिडियोलाई कसरी परिभाषा गर्नहुन्छ ?
-गितको मर्म र भाव अनुसारको प्रस्तुति ! अहिले हेर्ने जमाना भएकाले गितलाई भिडियोले न्याय गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
#भिडियो राम्रो हुन के के कुरा आवश्यक हुन्छ ?
-सुरुमा त गित राम्रो हुनुपरयो तब मात्र भिडियो गर्न जोस आउँछ । त्यसपछि कलाकार, कन्सेप्ट र प्रस्तुतिको सहि संयोजनले म्युजिक भिडियो राम्रो बन्छ मेरो बिचारमा !
#भिडियोमा स्टोरी सहितको प्रस्तुति दिन कत्तिको चुनौति हुन्छ ?
-एकदमै, यसमा समय र दिमाग दुबै खर्च हुन्छ । सुगम पोख्रेलको मेरो जिवन गर्दा तिन दिन जति लागेको थियो । यस्तै उदेष श्रेष्ठको आँसुको थोपा गर्दा दुइ दिन लागेको थियो ।
#डिरेक्सन करिअरमा यहाँसम्म आइपुग्नुको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
-कर्ममा विश्वास राख्ने भएकाले सुरुमा त म आफनो कामलाई नै दिन्छु । यद्यपी संगितकार राहुल प्रधानले लगाएको गुनलाई भने म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन । मैले सोलो डिरेक्सन सुरु गर्दा उहाँले कुनै कुरामा पनि कम्प्रमाइज गर्दिनुभएन र त्यसैकारण मैले झुमीझुमी गितलाइ न्याय गर्न सके र फलस्वरुप मैले पछि धेैरै कामहरु पाउँदै गएँ ।
#टेलिभिजनको ब्यस्त दैनिकी हँुदाहँुदै निर्देशनतिर हात हाल्ने सोच कसरी आयो ?
-टेलिभिजनसँगसँगै निर्देशनमा पनि मलाई त्यतिकै रुचि थियो । मैले सोलो डाइरेक्सन गर्नअघि जीटु वान प्रोडक्सनमा धरै समय सिकेँ । सक्षम भए भन्ने लागेपछि चाहिँ एकल निर्देशन थालेको हँु । त्यसअघि मेरो सहकर्मी सोनाम पाख्रीनसँग मिलेर करिब एक दर्जन भिडियोमा काम गरिसकेको थिएँ ।
#आगामी योजना के छ त ?
-यस्तै राम्रो कामहरु गर्दै जाने, केही नयाँ प्रस्तुति दिन सकु दर्शकलाई भन्ने सोच छ । चलचित्र पनि गर्ने सोच छ यद्यपी अहिले छलफलकै क्रममा भएकाले कुराहरु अघि बढीरहेको छ । फिक्स भयो भने शायद केही समयपछि यहाँहरुले अवश्य थाहा पाउनुहुन्छ ।